Saddex qof oo ku geeriyootay qarax gaari oo ka dhacay Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaSaddex qof oo ku geeriyootay qarax gaari oo ka dhacay Muqdisho
August 6, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Qaraxa ayaa ka dhacay makhaayad kutaala jidka Maka Al Mukarama. [Xigashada Sawirka: Reuters]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Saddex qof ayaa ku geeriyootay qarax gaari oo ka dhacay magaalada Muqdisho fiidkii xalay oo Axad ahayd, sida ay sheegeen ciidamada booliiska.
Saraakiisha booliiska ayaa warbaahinta u sheegay in gaari qaraxa ah la dhigay kasoo horjeedka makhaayad kutaala jidka mashquulka badan ee Maka Al Mukarama uu qarxay.
Irida makhaayada ayaa burburtay, dhiiga badan ayaa ku daatay sakxada makhaayada kuraastiina waa ay kala daateen.
Ma jirto cid si dhaqso ah u sheegatay masuuliyada qaraxa, balse argagixisada Al-Shabaab ayaa weerarada noocaan oo kale ah ka geysata Muqdisho.
May 5, 2018 Khabiirka madaxa banaan ee Qaramada Midoobay u qaabilsan xaalada bini’aadanimada Soomaaliya oo sheegay in si deg deg ah loo sii daayo dhammaan caruurta askar ahaanta loo qortay